Leader Fanilo : “Maika ny fikaonandoha isan’ambaratonga” | NewsMada
Leader Fanilo : “Maika ny fikaonandoha isan’ambaratonga”
Inona ny vahaolana amin’izao olana mianjady amin’ny firenena izao? Maika ny fifanatonana sy ny fikaonandoha isan’ambaratonga, raha ny fijerin’ny Leader Fanilo.
“Mitoky tanteraka amin’ny teny ierana malagasy ny Leader Fanilo. Koa mitaky ny fifanatonana sy fikaonandoha isan’ambaratonga hamahana ny olana eo amin’ny tsy fitoviam-pari-piainana, ny tsy ara-drariny eo amin’ny fiarahamonina. Maika tena maika izany dinika izany.“
Io ny fanambaran’ny Leader Fanilo tarihin’ny filoha nasionaly, Rabesa Zafera Antoine, omaly, momba ny toe-draharaham-pirenena. Eo koa ny lesoka eo amin’ny fanabeazana, fahasalamam-bahoaka, ny kolikoly, ny kiantranoantrano, ny tsy fanajana ny zon’olombelona, ny fanamparam-pahefana isan-karazany…
Misy fahalovana mamely ny sehatra sy ny sokajy sosialy rehetra eto Madagasikara, araka ny efa notsahiavin’ny antoko, desambra 2016. Vokatry ny tsy fanajana ny fitsipi-pitondrantena ara-moraly izany, izay tokony hifehy ny fanaovana politika eto Madagasikara.
Voaporofo ny tsy fanajana etika eo amin’ny fanaovana politika sy ny fitondrana raharaham-pirenena: milentika anaty fahantrana lalina ny vahoaka, manjaka ny tsy fandriampahalemana, manenika ny sehatra rehetra ny kolikoly sy ny tsimatimanota.
Mandindona ny ady an-trano
Manjary fototry ny famonoana ny osa ny fitsarana, tsy manafina ny harembe azo amin’ny kolikoly ny mpitsara sy ny mpisolovava mifandray tendro… Valala voatango manoloana izany ny vahoaka, ka mamoy fo amin’ny fitsaram-bahoaka. Atao harena adala tompo ny harem-pirenena, aondrana any ivelany. Vokany, tandindomin’ny ady an-trano maimbo adim-poko sy adim-pinoana ny firenentsika.
Tsy nampanarahina ny foto-kevitra manome tombondahiny ny faritra. Tratra aoriana ny fitondrana ny fitsinjaram-pahefana, fa ny avo ihany no tovonana. Vokany, tandindomin’ny adim-poko sy ny adim-paritra i Madagasikara. Afa-drakotra ny harem-pirenena adala tompo, lasa manararaotra ny vahiny.
“Tsy vitan’ny fidradradradrana fitiavan-tanindrazana ny raharaha“, hoy ny Leader Fanilo. Ny lalàna no manafaka, fa ny fahafahana no manandevo. Nomelohin’ny antoko hatrany ny fanonganam-panjakana, sivily na miaramila, tsy manaja ny fifandimbiasan-toerana ara-demokratika.